Ogaden News Agency (ONA) – Taleefishinada Kenya oo Hawada Laga Saaray Dhaarinta Raila Awgeed.
Taleefishinada Kenya oo Hawada Laga Saaray Dhaarinta Raila Awgeed.
Posted by Dayr	/ January 31, 2018
Dowladda Kenya ayaa gabi ahaanba hawada ka saaray illaa 3 taleefishin oo ah kuwa gaarka loo leeyahay, kuwaas oo si toos ah u tabinayay xafladda caleemo-saarka madaxweynenimo ee hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga.
Boqolaal taageerayaal ah ayaa isugu tagay beerta Uhuru Park, halkaas oo la filayo in lagu dhaariyo Raila Odinga iyo ku xigeenkiisa Kolonso Musyoka. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa taleefishinada uga digay in ay baahiyaan dhaarinta Raila kadib kulan maalmo ka hor ka dhacay madaxtooyada dalka.
Xeer Illaaliyaha guud ee Kenya ayaa isna ka digay in hadii la dhaariyo Raila ay ka dhigantahay khayaano qaran. Taleefishinada hawada laga saaray ayaa kala ah Citizen TV, NTV iyo KTN oo ah kuwa si gaar ah loo leeyahay.
Wariyaha BBC-da Ann Soy ayaa sheegaysa in hawada laga saaro TVyada in ay tahay talaabo qeyru caadi ah. Caasimada Nairobi iskuulaadka qaar ayaa la xidhay cabsi laga qabo rabshado ka dhaca magaalada. Mar sii horaysay booliiska ayaa isku xayndaabay beerta Uhuru Park, balse markii dambe ayay firaaqeeyeen. Raila ayaa sheegay in uu isaga ku guuleystay doorashadii dhacday bishii August ee sanadkii hore.